Ishishini | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
ezaposwa ngomhla 15.01.2021 15.01.2021
I-Bitcoin yimali ebonakalayo. Kodwa yintoni i-bitcoin kwaye kutheni iyimali ebonakalayo?
Yintoni enokuyenza xa kungekho nto yokuhlawula imali? Inkcazo, iingcebiso kunye nokuxazulula ingxaki
Ngelishwa, uninzi lwabantu oluthatha imali mboleko alucingi ngento yokuba banokugula, baphulukane nomsebenzi okanye bangene kwezinye iimeko ezinzima. Njengomthetho, iingxaki zesolvency aziveli ngenxa ye ...
Kuphi kunye nendlela yokutshala imali kwipesenteji ephezulu?
Ukuhlala ngaphandle koovimba bemali yosuku olunethayo sisigqibo esikhawulezileyo. Ngaphandle kwemeko enzima elizweni, unokuhlaziya uhlahlo-lwabiwo mali losapho lwakho ngendlela yokuba uqale ukugcina imali, uyila, ...
I-Fuel Excise eRashiya
Irhafu yomrhumo kwipetroli kunye nedizili luhlobo lweerhafu ezirhafiswa ngoosomashishini nakwimibutho. Ukuncitshiswa kwabo kuyenziwa xa besenza imisebenzi ethile yeshishini, kubandakanya ukuhamba kweemveliso ngaphaya komda wamasiko ...
Sberbank, "Uqoqosho" iphakheji yebhanki ephathekayo: uphononongo
Ukusetyenziswa kweenkonzo zeSberbank, abathengi banokuzidibanisa nenkonzo ye "Mobile Bank", enikezelwa ngokudibanisa iselfowuni kumnini wamakhadi ebhanki eSberbank. "IBhanki Ehambayo" (irhafu "Ezoqoqosho" ...
Chiller - yintoni na? Chiller Rhoss kunye nabanye
Kule mihla, izixhobo zefriji ezibizwa ngokuba yi-chiller zisetyenziswa kumanqanaba amaninzi obomi bomntu. Yintoni? Iimpendulo zale mibuzo neminye emininzi zikweli nqaku. Chiller - yintoni ...
Iibhokhwe: iintlobo zeenkomo kunye neempawu zazo. Imveliso yenyama yeBull
Zonke iintlobo zeenkomo zahlulwe zangamacandelo amathathu aphambili: ideri, inyama nobisi nenyama. Uhlobo lokugqibela lwezilwanyana lunobunzima obukhulu kunye nenqanaba lokukhula. Inyama yeenkomo ezinjalo ihlala igqunywe ngamanqatha, ...
Zeolite - yintoni na? I-Zeolite yendalo kunye nokwenziwa. I-Zeolite: iipropathi, usetyenziso, izibonelelo kunye nokwenzakala
Igama lale minerali imangalisayo livela kwi-zeo yamaGrike- "ukubilisa" kunye ne-lithos - "ilitye", kuba xa lifakwa emanzini, liphuphuma umoya ixesha elide. I-zeolite yendalo yaqala ukuchazwa ngenkulungwane ye-XNUMX. ...
Indlela yokwahlula i-gander kwi-goose: zangaphandle, iimpawu zokuziphatha nezibonakaliso
Ukulima amarhanisi lelinye lamashishini anengeniso kakhulu namhlanje. Ayizizo zonke iintlobo zeenkuku zokufuya iinkukhu eziyaziyo indlela yokwahlula i-gander kwirhanisi. Kwaye kubaluleke kakhulu ukuba ...
Ungayifaka njani imali kwiYandex iye kwiQiwi ngokulula, ngokukhawuleza, ngaphandle kwelahleko?
Kule minyaka idlulileyo, i-Intanethi ibingeyondawo nje yolonwabo, kodwa ikwayindawo yokuthengiselana, intengiselwano yeakhawunti, intlawulo yomsebenzi owenziweyo, ukuthengisa kunye neenkonzo. Ewe ukuhambisa imali ...
Ukuboleka kuBeeline? Ngubani umqhubi ozimisele ukubonelela ngemboleko?
Okwangoku, abaqhubi beenkonzo zonxibelelwano ngefowuni abakuniki kuphela umgangatho ophakamileyo wonxibelelwano, amaxabiso aphantsi okufowuna, kodwa kunye nokukwazi ukunxibelelana naxa uphelelwe yimali kwiakhawunti yakho.
Njani kunye naluphi ixesha lokusika i-currants
Inkqubo ebalulekileyo njengokuthena i-currant iyimfuneko ikakhulu ukuze ufumane isivuno esihle. Phakathi kwezinye izinto, oku kwandisa ubungakanani bamajikijolo. Ke ngoko, uninzi lwabahlali basehlotyeni banenkxalabo malunga nombuzo ...
Yintoni enenzuzo yokuthengisa: iingcebiso kunye namacebo
Ngaphambi kokuba uqale ishishini eligxile kwintengiso yento ethile, kuya kufuneka uhlalutye imarike ngokweenkcukacha, ufumanise ukuba yintoni inzuzo ekuthengiseni kwintengiso. Emva kwayo yonke loo nto, kuhlala kukho ithuba lokuba i-niche ocwangcise ukuhlala kuyo yeyakho ...
I-imeyili id ​​- yintoni na?
Kutshanje, iFSUE Russian Post itshintshele kwimigangatho yamazwe ngamazwe yenkonzo yabathengi. Oku kuthetha, ukongeza ekuphuculeni umgangatho wenkonzo kunye nekhompyuter kunye nokuzenzekelayo kwelona nani liphezulu leenkqubo zeposi, ukusetyenziswa kwezinto ezintsha ze ...
I-RDK-250 jib yokukhwela ngokukhawuleza yesikhombisi: ukucaciswa kobugcisa
Uphawu olutsha alusoloko luzalwa kwasekuqaleni. Ngamanye amaxesha kubonakala njengesiphumo sesivumelwano phakathi kwamazwe avelisayo, emva koko sahlule. Rhoqo ugcina iimpawu ezendele kubo bobabini abazali. Qhakazile ...
Yintoni eyinkunzi-mali yotyalo-mali? Ukusebenza kakuhle koqoqosho lwentengo-mali. Ixesha lokubuyisela
Isicwangciso seshishini sePizzeria ukusuka kwi-A ukuya kwiZ. Indlela yokuvula i-pizzeria
Yonke imihla kuninzi lwethu isihloko sokuqalisa ishishini lethu siya siba sesona sihambelana. Ilizwe lihlala lishukunyiswa ziingxaki zezoqoqosho, uhlala ukhathazwa kukuba uza kubhengeza ngomso emsebenzini ...
Umgqugquzeli webhasi kunye neebhokhwe. Imbuzi yokugcina abaqalayo
Iibhokhwe, ezinokulungelelaniswa ngokugqibeleleyo nakweyiphi na imeko, zinempilo entle kwaye azifuni nkathalo ikhethekileyo. Ke ngoko, namhlanje inani elandayo lamafama asekhaya aqala ukuzala ezi zilwanyana. Umxholo wabo uthathwa kakhulu ...
I-Silicone yokutya: Ukubunjwa, isicelo
Abicah yinto exhaphakileyo namhlanje esetyenziselwa ukuvelisa iimveliso ngeenjongo ezahlukeneyo. Ezi zinokuba ngumngundo (umngundo wokwenza imifanekiso eqingqiweyo, ubucwebe, njl. Njl.), Ukuloba, ...
Izixhobo zokuxhela imfuyo: inkcazelo, iinkcukacha kunye nokuphononongwa
Ukuxhelwa kunye nokuqhubekeka kokutya kwenyama enesiphumo yinkqubo entsonkothileyo nenamanqanaba amaninzi. Itekhnoloji ibonelela ngokusetyenziswa kwezixhobo ezizodwa, ezibandakanya iiyunithi zokupholisa, ukugcina kunye nokugcina imizimba ...
Page 1 Page 2 ... Page 36 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-55 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,039.